A security policy mo - Английский - Бирманский Переводы и примеры
Вы искали:asecurity policy model based on the ... (Английский - Бирманский)
Syndromic surveillance is done based on the symptoms of an individual that corresponds to COVID-19.
ရောဂါလက္ခဏာစုဆိုင်ရာ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုကို COVID-19 ရှိနေသည့် လူတစ်ဦးချင်း၏ ရောဂါလက္ခဏာများအပေါ် အခြေခံ၍ လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ကျောင်းပိတ်ခြင်းနှင် အိမ်တွင်သီးခြားစောင့်ကြည့်ခြင်း အခြေအနေများ ပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်မည့် သင်ကြားမှုနည်းလမ်းများကို ရွေးချယ်ပါ။
သို့ရာတွင် ၎င်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် TCM ၏ သဘောတရားများအပေါ်အခြေခံ၍ ရောဂါတစ်ခုကို ရှာဖွေစစ်ဆေးသည့်အပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားခြားနားမည်ဖြစ်သော ဆေးဖော်နည်းတစ်ခုတွင် ပါဝင်မည့် ပါဝင်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏ အတွဲအစပ်ပေါ်တွင် မှီတည်နေသည်။
သို့ရာတွင် (China) တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကူးစက်ခံရမှုအသစ်အရေအတွက် လျော့နည်းကျဆင်းလာမှုများအရ အလားအလာ လက္ခဏာကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိ လုပ်ဆောင်နေသည့် မဟာဗျူဟာလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ထိရောက်မှုရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။
This, however, varies based on the humidity and temperature.Pets and other animals have tested positive for COVID-19.
လေထုစိုထိုင်းဆနှင့် အပူချိန်ပေါ်တွင် မူတည်ပြောင်းလဲသည်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့် အခြား တိရစ္ဆာန်များတွင် COVID-19 ကူးစက်ခံနေရကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အတိကျဆုံးရောဂါဖြစ်ပွားမှုကာလအပေါ်မူတည်၍ ထိရောက်သည့် သီးခြားခွဲခြားနေထိုင်ခြင်းကာလကို ချိန်ညှိရန်မှာ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်များအတွက် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ သို့မှသာ ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ ကူးစက်ခံထားရသူများမှ အခြားသူများထံသို့ ဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Note however that COVID-19 isanew disease, our awareness and knowledge is gradually increasing based on the ongoing research findings and clinical practice experience; hence, the strategies of diagnosis and treatment are also continually updated.
မှတ်သားရန်မှာ COVID-19 သည် ရောဂါအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည် ဆိုသော်လည်း လုပ်ဆောင်နေဆဲ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များနှင့် ဆေးကုသမှု လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ရောဂါအကြောင်း အသိနှင့် ဗဟုသုတများမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးပွားလာလျက်ရှိပြီး ဤနည်းအားဖြင့် ရောဂါရှာဖွေမှုနှင့် ကုသမှု နည်းဗျူဟာများကိုလည်း ဆက်တိုက် အဆင့်မြှင့်တင်လျက်ရှိသည်။
A more recent study, as described above, demonstrates that the incubation period was 4.8 (3.0-7.2) days based on the demography of 8,866 cases.
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း လူပေါင်း 8,866 ဦး၏ ရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုအပေါ် အခြေခံ၍ မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှု တစ်ခုအရ ရောဂါပျိုးရက် ကာလသည် 4.8 (3.0-7.2) ရက်ဖြစ်သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
အခြားသောကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်များ၏ အပြုအမူပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ရောဂါကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းမှာ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော်လည်း၊ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုမှ ပြန်လည်ကျန်းမာလာသောဖြစ်စဉ်များ၌ ၎င်းတို့သည် နောက်ပိုင်းတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်စစ်ဆေးမှု၌ ပေါ့စတစ်ပြန်ဖြစ်နေကြောင်း သတင်းပို့ထားပါသည်။
Based on the comparative analysis between isolates of human and civet SARS-CoVs, SARS-CoV is thought to undergo rapid adaptation in different hosts, particularly with mutations at the RBD of the S protein.
လူသားများနှင့် ကြောင်ကတိုး SARS-CoVs ကို သီးခြားစီ နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုပေါ်တွင်အခြေခံ၍၊ SARS-CoV အား သီးခြားအားဖြင့် S ပရိုတိန်း၏ RBD တွင် သန္ဓေပြောင်းခြင်းများနှင့်အတူ မတူညီသောလက်ခံကောင်များတွင် အမြန်သဟဇာတဖြစ်နိုင်မှုမျိုး ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု တွေးထင်ထားပါသည်။
အလုပ်ခွင်တွင် မှန်ကန်သော ထိန်းချုပ်မှုသည် အလုပ်နေရာနှင့် အလုပ် ရည်မှန်းချက်များ အပေါ်တွင် ထိတွေ့မှု အရင်းအမြစ်များ၏ ဘေးအန္တရာယ် စမ်းစစ်မှု၊ လူထုအတွင်း ရောဂါ ပြင်းထန်မှု နှင့် COVID-19 ရရှိနိုင်သော အလားအလာ ရှိနိုင်သည့် အလုပ်သမားများ တစ်ဦးချင်းအတွက် ဘေးအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းအရာများအပေါ် မူတည်သည်။
အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို ဆန်းစစ်ပြီး အသင့်တော်ဆုံးသော ကိရိယာများကို ရွေးချယ်ပါ။ ဒေသတွင်း ဓါတ်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှု၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်နိုင်မှုနှင့် ဆရာများ၊ ကျောင်းသားများ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်မှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ အဆင့်မြင့် နည်းပညာနှင့် နည်းပညာအနိမ့် ဖြေရှင်းနည်းများကို အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ပါ။
However, the coronavirus disease 2019 (COVID-19) isanew disease, our awareness and knowledge are gradually increasing based on the ongoing research findings and clinical practice experience; hence, the strategies of diagnosis and treatment are also continually updated.
သို့သော် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါ 2019 (COVID-19) သည် ရောဂါအသစ်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ သုတေသန တွေ့ရှိချက်များနှင့် ကုသမှုအလေ့အထ အတွေ့အကြုံတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတိရှိမှုနှင့် သိနားလည်မှုက တဖြည်းဖြည့်း တိုးတက်လာပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ရောဂါစစ်ဆေးမှုနှင့် ကုသမှုအတွက် နည်းလမ်းများကိုလည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ပြင်ဆင်မွမ်းမံထားပါသည်။
Based on the difference in protein sequences, CoVs are classified into four genera (alpha-CoV, beta-CoV, gamma-CoV and delta-CoV), among which the beta-CoV genera contains most HCoVs and is subdivided into four lineages (A, B, C and D).
မတူညီသော ပရိုတိန်းနောက်ဆက်တွဲ အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွင်းပေါ်အခြေခံ၍ CoVs ရောဂါပိုးများကို မျိုးစုလေးမျိုး (alpha-CoV, beta-CoV, gamma-CoV နှင့် delta-CoV) အုပ်စုခွဲခြားထားပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ beta-CoV မျိုးစုတွင် HCoVs ပါဝင်မှုများပြီး (A, B, C နှင် D) မျိုးရိုးလေးခုအတွင်းသို့ ထပ်ဆင့် ပိုင်းခြားထားသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ 1974 ခုနှစ် အစီရင်ခံစာအရ ကျောင်းပညာရေးကို အောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါသည်။ ကျောင်းပညာရေး- မူလတန်းကျောင်းမှ တက္ကသိုလ်အထိ အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး ကာလအအလိုက် ပိုင်းခြားထားသော၊ အထွေထွေ ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအပြင် အထူးပြုလေ့လာမှု အစီအစဉ်မျိုးစုံနှင့် နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ အချိန်ပြည့် လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းများ ပါဝင်သော ‘ပညာရေးစနစ်’။ COVID-19 သက်ရောက်မှုဒဏ် ခံခဲ့ရသော ကျောင်းသားများနှင့် လေ့လာသင်ယူသူများစွာနှင့် ပတ်သက်၍ စုဆောင်းရယူခဲ့သည် ဒေတာအများစုကို ကျောင်းပညာရေး စနစ်များ ပိတ်လိုက်မှုပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ခဲ့သည်။
fields force (Английский>Итальянский)contoh karangan ucapan bahasa english introduction (Малайский>Английский)hindi moral stories (Хинди>Телугу)unahin ang dapat unahin (Тагальский>Английский)menggigil (Малайский>Китайский (упрощенный))kan karuvalayam (Тамильский>Английский)plankalkül (Английский>Немецкий)dahil (Тагальский>Английский)terung dayak (Малайский>Китайский (упрощенный))5 pm (Английский>Тагальский)apa arti kontol (Индонезийский>Тагальский)saan kayo (Тагальский>Английский)semoga allah membalas kebaikan kalian (Индонезийский>Английский)belajar jarak jauh (Индонезийский>Английский)bangla x video (Кхмерский>Английский)memetik gitar (Малайский>Китайский (упрощенный))mamaus (Английский>Тагальский)omväxlande, tomt (Шведский>Английский)setahun yang lalu (Индонезийский>Английский)फूटी किस्मत (Хинди>Английский)ideal (Английский>Тагальский)codici comunitari armonizzati (Итальянский>Английский)tær (Фарерский>Английский)maksud rangkai kata bahan terbuang (Малайский>Английский)verjaardag (Голландский>Французский)